Mpanamboatra vahaolana jiro - Shanghai P&Q fanazavana Co., Ltd.
Shanghai P&Q Lighting Co., Ltd. natsangana tamin'ny 2005 dia mpanamboatra jiro matihanina amin'ny fanariana maty, tsindrona plastika ary vy. Mivoatra avy amin'ny kely iray ka lasa lehibe kokoa miaraka amin'ny ozinina fanariana maty sy fivoriambe ao Haining tsikelikely. Milina fanariana maty avy amin'ny 200 taonina ~ 800tons. Manambola hatrany amin'ny fitaovana vaovao izahay mba hiatrehana ny fanamby amin'ny fanatsarana hatrany, ary hanome hatrany ireo vahaolana mety indrindra amin'ny filan'ny mpanjifanay rehetra. Ny P&Q dia tsy misy tsindrona plastika sy vy vita amin'ny metaly, fa mety manome ampahany amin'ny tsindrona plastika sy vy koa arakaraka ny takian'ny mpanjifa.
Ny orinasa P&Q dia ao Haining, Zhejiang, Sina. Tsy latsaky ny 6000 m2. Ny famokarana dia niasa tamina fitantanana kalitao ISO9001. Ary ny birao sy ny orinasa dia nitantana ny rafitra ERP hatramin'ny taona 2019.
FIZARANA METAL SHEET